နည်းပညာဖြင့် လုပ်ထားသော ရွှေအတု များဖြင့် အလိမ်ခံ လိုက်ရ သည့် ရွှေဆိုင် မိသားစု မှ ရှင်းလင်း – Shwewiki.com
နည်းပညာဖြင့် လုပ်ထားသော ရွှေအတု များဖြင့် အလိမ်ခံ လိုက်ရ သည့် ရွှေဆိုင် မိသားစု မှ ရှင်းလင်း
မြဝတီမြို့တွင် နည်းပညာ မြင့်မားစွာဖြင့် ရွှေအတု ပေါင်နှံ အလိမ်ခံခဲ့ရသည့် “ရွှေပြည့်လှိုင်” ရွှေဆိုင် မိသားစုမှ ယမန်နေ့ည ၇:ဝဝ နာရီအချိန်က နည်းပညာ မြင့်မားစွာဖြင့် ရွှေအတု လုပ်ကာ လိမ်လည်ပေါင်စားနေသည့် ရွှေလိမ်ဂိုဏ်းရှိနေကြောင်းနှင့် မြဝတီနှင့်တကွအခြားမြို့များမှ ရွှေဆိုင်များ, ၎င်းတို့ကဲ့သို့ အလိမ်မခံရစေရန် မြဝတီအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ယခု၎င်းတို့အလိမ်ခံရသည့်ဖြစ်စဉ်တွင် ရွှေဆိုင်၌ လာပေါင်သော ရွှေသည်သာမန်မှတ်တိုက်စစ်ဆေးကြည့်ရုံနှင့်မရတော့ဘဲပန်းထိမ်ဆရာများနှင့် လက်ရာကောင်းမွန်စွာဖြင့် ခေတ်မီနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ပြုလုပ်ထားသည့်
ရွှေထည်များဖြစ်သဖြင့် အကြိမ်များစွာ လာရောက်ပေါင်နှံသည့် အမျိုးသမီးအား မသင်္ကာ၍ ရဲထံအကြောင်းကြားခဲ့ရာမှရွှေအတုပေါင်နှံသည့် မဌေးဌေးဝင်းအားမြဝတီရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်အရေးယူနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့မြဝတီရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဥက္ကဌဦးမင်းအုန်းဖေ (သီရိဝေလျှံ ရွှေဆိုင်) နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးဇေယျာလင်း (သိန်းငှက်သုံးကောင် ရွှေဆိုင်) တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် ရွှေထည်ပစ္စည်း အတုများပြုလုပ်၍ ရွှေဆိုင်သို့ မကြာခဏ လာရောက်ပေါင်နှံနေသူကို ဖမ်းဆီးလိုက်သည့်
သတင်းအပြည့်အစုံမှာ – သြဂုတ် ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် မြဝတီမြို့ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ရှိ ရွှေဆိုင်တစ်ခုမှအသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးသည် ၎င်း၏ဆိုင်သို့ မဌေးဝင်း ဟုအမည်ရသော အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ရွှေအတုများပြုလုပ်ပြီး အမည်အမျိုးမျိုးသုံးကာ လာရောက်လိမ်လည် ပေါင်နှံနေကြောင်း ရဲစခန်းသို့ လာရောက်တိုင် တန်းခဲ့သည်ဟု ရဲစခန်းမှသိရသည်။အဆိုပါ မဌေးဝင်းဆိုသူမှာ ကွမ်းခြံကုန်းရွာ ဘုရားကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးနေသူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းသည် သြဂုတ် ၁၀ ရက်နေ့မနက်က ရွှေဆိုင်သို့သွားပြီး မြန်မာရွှေ(၁၅- ၃၈)ဂရမ်ရှိ နှစ်ထပ်ဆွဲကြိုး(၁)ကုံးအား (၈)သိန်းဖြင့်ပေါင်နှံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က အဆိုပါ မဌေးဝင်း ဆိုသူ ၏ အမည်ကိုမေးမြန်းရာ ၎င်း၏ အမည်မှာ မထက်ထက်အောင် ဟု သိရပြီး ယခင် ကလည်း ယခုကဲ့သို့ လာရောက် ပေါင်နှံဘူးကြောင်း သိရှိရသဖြင့်မှတ်တမ်းပြန်ကြည့်ရာ ၎င်းသည် မခင်ခင်ဦး ဟူသောအမည်ဖြင့် မြန်မာရွှေ(၁၀. ၃) ဂရမ်ရှိ K လက်ကောက် (၁)ကွင်း၊ မြန်မာရွှေ(၁၄-၃၇)ဂရမ်ရှိ ဆွဲကြိုး(၁)ကုံး၊ ပေါင်း (၂)ခုကို ငွေကျပ်(၁၃၅ဝဝဝဝိ/-)ဖြင့်ပေါင်နှံ ထားဖူးကြောင်း သိရှိရသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ယင်းအတွက် ၎င်းပေါင်နှံခဲ့ဖူးသော ရွှေထည် ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးရာ ရွှေအတုများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ၎င်းကို မြဝတီမြို့မရဲစခန်းတွင် (ပ)၄၆၀/ ၂၀၂၀ ၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၄၂၀ ဖြင့် အမှုရေးဖွင့် ဖမ်းဆီးထားပြီး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျှက် ရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
နညျးပညာဖွငျ့ လုပျထားသော ရှအေတု မြားဖွငျ့ အလိမျခံ လိုကျရ သညျ့ ရှဆေိုငျ မိသားစု မှ ရှငျးလငျး
မွဝတီမွို့တှငျ နညျးပညာ မွငျ့မားစှာဖွငျ့ ရှအေတု ပေါငျနှံ အလိမျခံခဲ့ရသညျ့ “ရှပွေညျ့လှိုငျ” ရှဆေိုငျ မိသားစုမှ ယမနျနညေ့ ၇:ဝဝ နာရီအခြိနျက နညျးပညာ မွငျ့မားစှာဖွငျ့ ရှအေတု လုပျကာ လိမျလညျပေါငျစားနသေညျ့ ရှလေိမျဂိုဏျးရှိနကွေောငျးနှငျ့ မွဝတီနှငျ့တကှအခွားမွို့မြားမှ ရှဆေိုငျမြား, ၎င်းငျးတို့ကဲ့သို့ အလိမျမခံရစရေနျ မွဝတီအခွစေိုကျသတငျးမီဒီယာမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ပွောကွားခဲ့ကွသညျ။ ယခု၎င်းငျးတို့အလိမျခံရသညျ့ဖွဈစဉျတှငျ ရှဆေိုငျ၌ လာပေါငျသော ရှသေညျသာမနျမှတျတိုကျစဈဆေးကွညျ့ရုံနှငျ့မရတော့ဘဲပနျးထိမျဆရာမြားနှငျ့ လကျရာကောငျးမှနျစှာဖွငျ့ ခတျေမီနညျးပညာကို အသုံးပွု၍ပွုလုပျထားသညျ့
ရှထေညျမြားဖွဈသဖွငျ့ အကွိမျမြားစှာ လာရောကျပေါငျနှံသညျ့ အမြိုးသမီးအား မသင်ျကာ၍ ရဲထံအကွောငျးကွားခဲ့ရာမှရှအေတုပေါငျနှံသညျ့ မဌေးဌေးဝငျးအားမွဝတီရဲစခနျးတှငျ အမှုဖှငျ့အရေးယူနိုငျခဲ့သညျ။ အဆိုပါ တှဆေုံ့ပှဲသို့မွဝတီရှဆေိုငျလုပျငနျးရှငျမြားအသငျးမှ ဥက်ကဌဦးမငျးအုနျးဖေ (သီရိဝလြှေံ ရှဆေိုငျ) နှငျ့ အတှငျးရေးမှူး ဦးဇယြောလငျး (သိနျးငှကျသုံးကောငျ ရှဆေိုငျ) တို့လညျး တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့တှငျ ရှထေညျပစ်စညျး အတုမြားပွုလုပျ၍ ရှဆေိုငျသို့ မကွာခဏ လာရောကျပေါငျနှံနသေူကို ဖမျးဆီးလိုကျသညျ့
သတငျးအပွညျ့အစုံမှာ – သွဂုတျ ၁၀ ရကျနေ့ ညနေ ၆ နာရီခနျ့တှငျ မွဝတီမွို့ ဘုရငျ့နောငျလမျး၊ အမှတျ(၄)ရပျကှကျရှိ ရှဆေိုငျတဈခုမှအသကျ ၃၁ နှဈအရှယျ ရှဆေိုငျပိုငျရှငျ အမြိုးသမီးသညျ ၎င်းငျး၏ဆိုငျသို့ မဌေးဝငျး ဟုအမညျရသော အမြိုးသမီး တဈဦးက ရှအေတုမြားပွုလုပျပွီး အမညျအမြိုးမြိုးသုံးကာ လာရောကျလိမျလညျ ပေါငျနှံနကွေောငျး ရဲစခနျးသို့ လာရောကျတိုငျ တနျးခဲ့သညျဟု ရဲစခနျးမှသိရသညျ။အဆိုပါ မဌေးဝငျးဆိုသူမှာ ကှမျးခွံကုနျးရှာ ဘုရားကုနျး ကြေးရှာအုပျစု၊ သနျလငျြမွို့နယျ၊ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီးနသေူဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ၎င်းငျးသညျ သွဂုတျ ၁၀ ရကျနမေ့နကျက ရှဆေိုငျသို့သှားပွီး မွနျမာရှေ(၁၅- ၃၈)ဂရမျရှိ နှဈထပျဆှဲကွိုး(၁)ကုံးအား (၈)သိနျးဖွငျ့ပေါငျနှံခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး အခငျးဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ ရဲတပျဖှဲ့ထံမှ သိရသညျ။
ရဲတပျဖှဲ့က အဆိုပါ မဌေးဝငျး ဆိုသူ ၏ အမညျကိုမေးမွနျးရာ ၎င်းငျး၏ အမညျမှာ မထကျထကျအောငျ ဟု သိရပွီး ယခငျ ကလညျး ယခုကဲ့သို့ လာရောကျ ပေါငျနှံဘူးကွောငျး သိရှိရသဖွငျ့မှတျတမျးပွနျကွညျ့ရာ ၎င်းငျးသညျ မခငျခငျဦး ဟူသောအမညျဖွငျ့ မွနျမာရှေ(၁၀. ၃) ဂရမျရှိ K လကျကောကျ (၁)ကှငျး၊ မွနျမာရှေ(၁၄-၃၇)ဂရမျရှိ ဆှဲကွိုး(၁)ကုံး၊ ပေါငျး (၂)ခုကို ငှကေပျြ(၁၃၅ဝဝဝဝိ/-)ဖွငျ့ပေါငျနှံ ထားဖူးကွောငျး သိရှိရသညျဟု ရဲတပျဖှဲ့ထံမှ သိရသညျ။ ယငျးအတှကျ ၎င်းငျးပေါငျနှံခဲ့ဖူးသော ရှထေညျ ပစ်စညျးမြားကို စဈဆေးရာ ရှအေတုမြားဖွဈကွောငျး သိရှိရသဖွငျ့ ၎င်းငျးကို မွဝတီမွို့မရဲစခနျးတှငျ (ပ)၄၆၀/ ၂၀၂၀ ၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ-၄၂၀ ဖွငျ့ အမှုရေးဖှငျ့ ဖမျးဆီးထားပွီး စဈဆေးဆောငျရှကျလြှကျ ရှိကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့ထံမှ သိရသညျ။
ထမင်းမကျွေးနိုင် တဲ့ ဂိမ်း ကို အပြတ်ဖြတ်နိုင် ခဲ့တဲ့ မြန်မာတနိုင်ငံ လုံး ပထမဆုရှင် မမေသက်ထွန်း